Befelatanana : tsy navela haka razana ny havany, niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana | NewsMada
Befelatanana : tsy navela haka razana ny havany, niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana
Niteraka fifanjevoana teny amin’ny hopitaly Befelatanana, omaly ny fandraran’ny mpitsabo mba tsy haka ny fatin’olona olona iray voalaza fa tratran’ny pesta. Nilaza anefa ny fianakaviana fa hoe fahatapahan’ny lalandra ny nahafaty ilay olona. Niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana…
Raikitra indray ny gidragidra teny amin’ny hopitaly Befelatanana, omaly. Araka ny fampitam-baovao voaray teny anivon’ny hopitaly, nisy olona maty tao amin’ny hopitaly Befelatanana. Voalaza fa hoe matin’ny pesta ilay olona namoy ny ainy ka nosakanana tsy mahazo mitondra ny razana ny havany. Nilaza kosa anefa ireto havan’ny maty fa fahatapahan’ny lalandra no nitarika ny fahafatesan’ny havan’izy ireo ka tsy nanaiky lembenana izy ireo. Nitarika fifanjevoana izany ka voatery niditra an-tsehatra ny teo anivon’ny mpitandro filaminana niambina ny razana tsy mahazo mivoaka.
Manoloana ny fiparitahan’ny aretina pesta amin’izao fotoana izao, mandray anjara amin’ny fiarovana ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Nambaran’ny lehiben’ny vondron-tobim-paritra Analamanga, ny Kly Ravoavy Zafisambatra raha ilaina ny fampiasan-kery dia tsy maintsy manao izany ny zandarimaria manoloana ireo olona minia tsy miraharaha ny fepetra efa napetraky ny fanjakana. Niditra an-tsehatra nanakana ireo olona tsy mahazo niditra tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina tamin’ny lalaon’ny CCCOI ny zandary. Teo koa ny fahatrarana ilay fiara teny amin’ny RN 2 efa nihoatra an’i Carion no naverina satria nahitana trangana aretina pesta tamin’ireo mpandeha.
Niteraka korontana toy izao koa tany Toamasina ny fandrarana ny havan’ireo tratran’ny pesta mba tsy haka ny razana ka voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana